siansa sy teknolojia | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Smartphone Microsoft Lumia 435: famerenana, manokana ary hevitra
Ny Lumia 435 dia maodely mahaliana momba ny teti-bola. Izy io no fitaovana voalohany ao amin'ny laharana 400 mba hikendry mpihaino kendrena ankoatry ny ankamaroan'ny maodelin'ny marika. Raha mila smartphone ianao ho an'ny ankizy, backup na ...
Inona no atao diode GP ary inona ny tanjony?
Matetika, ireo mpampiasa fitaovan'ny solosaina dia manadino fa, tsy toy ny fitaovana akustika, ny fahitalavitra ary ny kojakojam-pianakaviana hafa, dia mirongatra ny hafanana ary, vokatr'izany, tsy mandeha amin'ny laoniny ary ...
Trigger an'ny RS. Ny fitsipiky ny fampandehanana, ny diagram ampiasaina, ny latabatra fiovam-po
Ny mitarika dia ny fitaovana tsotra indrindra, izay automaton nomerika. Izy dia manana fanjakana marin-toerana roa. Ny iray amin'ireo fanjakana ireo dia nomena ny sanda "1", ary ny iray hafa - "0". Trigger state ary koa ny sandan'ny binary ...
Tokony hividy takelaka Xiaomi ve aho? Ny fijerena sy famerenana ireo modely tsara indrindra
Ny tsenan'ny solosaina takelaka, toy ny smartphone, dia miova be tokoa. Raha omaly fotsiny i Apple sy Samsung dia nantsoina hoe mpitarika tsy azo iadian-kevitra amin'ny indostria, dia manatratra azy ireo ihany koa ireo mpamokatra hafa ankehitriny. Ny iray tamin'izy ireo…
Ahoana ny famerenanao ny baoritra Canon
Ny mpanonta Inkjet no vahaolana mora vidy indrindra amin'ny famoahana ny fampahalalana nomerika amin'ny taratasy. Vitsy ny orinasa miasa amin'ny famokarana marobe ireo mpanonta printy toy izany. Ireto dia Epson, Canon ary HP. Ny hafa ...
Ohatrinona ny vidin'ny PS3? PS3 console - vidiny
Taorian'ny fahombiazan'ny PlayStation 2 sy PlayStation 1994 an'ny Sony, navoaka tamin'ny taona 2000 sy XNUMX, dia toa fotoana fohy monja ny fisehon'ny maodely vaovao. Ny tsaho voalohany momba ny lalao vaovao ...
Fanairana Burglar: fametrahana sy fametrahana
Ny fanairana mpangalatra dia andiana fitaovana teknika izay mampahafantatra ny fidirana tsy ara-dalàna ao amin'ny trano tsy miankina iray. Mandritra izany fotoana izany dia mamoaka feo mampihetsi-po izy ary mandefa fampahalalana amin'ny console console. Amin'ny tontolo maoderina…
Inona no atao hoe gyroscope?
Folo taona lasa izay, ny telefaona misy fifandraisana Internet, seranan-tsambo infrared, na teknolojia Bluetooth dia zavatra tsy mahazatra. Ankehitriny ireo asa rehetra ireo dia nanjary mahazatra, ary ny sasany amin'izy ireo aza ...
Nanoteknolojia ao amin'ny trano sy eo amin'ny indostrian'ny
Isan'andro isika dia manatona ny revolisiona tsy azo ihodivirana izay entin'ny nanotechnology. Mamorona fitaovana vaovao izahay, mahazo fitaovana tsy manam-paharoa izay tsy noeritreretinay teo aloha. Ny fampiasana ny nanoteknolojia amin'ny fiainana andavanandro dia mamela ...
Notebook Lenovo B590: famaritana manokana, famerenana ary hevitra
Ny andiany B590 dia azo omena amin'ny sokajy solosaina finday misy teti-bola tsara, rehefa mividy izay tsy mila trosa na trosa ianao. Fa na eo aza ny vidiny somary ambany (15-20 arivo roubles), ny solosaina finday ...
Samsung Wave 525: mamaritra, toe-javatra, hevitra. Ahoana ny tselatra? Samsung Wave 525 tsy mihodina: ny fomba hisaintsaina?
Tsy takona afenina fa ny anjaran'ny liona dia omena an'ireo finday avo lenta farany ambony, izay mahavariana ny olona rehetra amin'ny fiasan'izy ireo mihoapampana sy ny vidiny mihoapampana. Na izany aza, tsy mifanaraka amin'ny zava-misy rehetra, ny varotra dia ...
Ny fantsom-bolo manadio ny vazaha. Fitaovana
"Avy aiza ny vovoka?" - maharitra mandrakizay ny fanontaniana fa tsy miteny. Tsy misy mahalala ny valiny, fa mila miady amin'ity loza ity ianao saika isan'andro, indrindra amin'ny trano ao an-tanàna. ...
Ny mpanao makiazy tsara indrindra: fanamarihana, modely malaza, safidy
Ny fomba fiaina salama ampiarahina amin'ny sakafo mahavelona no malaza ankehitriny. Izay manara-maso ny bika aman'endriny sy ny fiadanany dia mahalala izay anjara asan'ny vokatra ronono masirasira amin'ny fiasan'ny vatana. TO ...
Malfunction ny milina fanasana. Mety ho fatiantoka an'ny milina fanasana
Ny milina fanasan-damba dia manana fahazarana simba. Matetika ny tompony dia tsy mahalala izay antony mahatonga ny fahasimbana ary mandray haingana ny telefaona hiantso ny tompony. Raha ny fitsipika dia marina ny zava-drehetra. Fa ny olana dia ...
Tsy mampihomehy foana ny Prankers. Iza ireo prankers ary maninona ireo tsy tratry ny ainga no tsy mahatakatra ny vazivazy ataony?
Amin'ny tontolon'ny maoderina, ny telefaona, finday na laharana finday, dia nijanona hatry ny ela mba ho fitaovana fifandraisana amin'ny fianakaviana sy ny namana fotsiny. Izy io dia ampiasain'ny banky amin'ny fampielezan-kevitra mavitrika ho an'ny mpanjifa, ny birao fandatsaham-bato dia atao matetika. Afa-tsy ...
Prestigio Multipad 4: famaritana fika sy famerenana
Ka anio dia haseho amintsika ny takelaka iray antsoina hoe Prestigio Multipad 4. Ny antony dia efa ela no nahafaly an'ireo mpividy ity fitaovana ity. Fa inona marina? Navoaka ve ny "Prestigio" ...
Ahoana ny fomba fanaovana detector metaly ao an-trano amin'ny fomba tsy vita?
Ny fofon'ny fivezivezena, ny hanitry ny fitsangatsanganana, na ny fanariana prosaic ny tranonao fahavaratra amin'ny potipoti-by maro samihafa dia mety hanondro ny fividianana fitaovana manokana. Ireo mpitsikilo metaly matihanina, izay fantatry ny rehetra rehetra, dia mendrika ...
Smartphone Explay Rio ("Explay Rio") - hevitra momba ny tompony, vidiny, sary ary ny mampiavaka ilay maodely
Androany, ny smartphone amin'ny teti-bola dia manomboka mahazo vahana tokoa. Ary azo takarina izany, satria raha ny fisehoana dia tsy mitovy amin'ny sainam-pirenena izy ireo ary amin'ny fotoana iray ihany dia mora vidy kokoa. Mazava ho azy, ho an'ny vidiny ilainao ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 222 Next Page
65 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,052.